University of Washington - Ọmụmụ na USA. Education Bro Magazine
University of Washington Nkọwa
tọrọ ntọala : 1861
Students (ihe ruru.) : 45000
Echefukwala atụle University of Washington
Idebanye aha na University of Washington
University of Washington bụ a ọha na alụmdi na e hiwere na 1861.
Nkuzi ụgwọ na Washington mahadum na- $35,000 (Aprox.).
Emi odude ke University District obi (mara dị ka U District) dị nnọọ n'ebe ugwu ogbe ndịda Seattle, na University of Washington bụ a ọnwụ onu research mahadum na a ogologo-eguzo akụkọ ihe mere eme dị ka otu n'ime ndị kasị ochie ọha oru na West Coast. Ụmụ akwụkwọ pụrụ isonyere otu n'ime ụlọ akwụkwọ 500 mbụ na klas na òtù, gụnyere ihe 50 sororities na fraternities, ma ọ bụ nwere ike na-amalite a ika ọhụrụ club na ọ dịghị ihe ọzọ anọ ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ. University of Washington a maara dị ka a COMMUTER akwụkwọ, na freshmen bụghị iwu na Ndị bi na ya campus. Housing kpom kwem maka ihe ọ bụla na-amụrụ. N'ihi na ndị na-eme ebi obibi Ụlọ Nzukọ Alaeze na, mahadum emesi "bi green" site ike nchekwaba na imegharị ihe maka iji. Na egwuregwu ubi, na ụlọ akwụkwọ Varsity na-eme egwuregwu na-asọmpi na NCAA Nkewa m Pac-12 Conference. The football otu egwuregwu, ọ kachasị, bụ a omenala otu eguzo-esi. The ìgwè na-anọchi anya ya abụọ mascots: otu, a costumed amụrụ maara dị ka Harry ndị Husky Dawg, na ndị ọzọ, Dubs, a ndụ n'Alaska husky. The mahadum mgbatị bụ free maka ụmụ akwụkwọ na-achọ a mgbatị.
The University of Washington na-enweta a hefty ego nke gọọmenti etiti ego n'afọ ọ bụla ọzọ iji kwalite ya ozi dị ka a ọha research alụmdi. Ezi ka nke malitere nnyocha, ụlọ akwụkwọ na akwado otu Undergraduate Research mkparita kwa afọ maka ụmụ akwụkwọ na-ewetara ọrụ ha obodo. The ụlọ akwụkwọ a ukwuu họọrọ School of Medicine, College of Engineering na Michael G. Ezi nlekota School of Business. Fọrọ nke nta atọ anọ nke University of Washington na-agụsị akwụkwọ anọgide na steeti. Ọwọrọiso Alumni agụnye Thomas Foley, mbụ U.S. Ọkà okwu nke House; Chris DeWolfe, ngalaba-Onye Okike nke myspace; na Irv Robbins, ngalaba-nchoputa na namesake nke Baskin-Robbins ice ude yinye.
The College of Arts & Sciences na-enye a ọnwụ onu emesapụ nkà mmụta na ọgaranya ohere ịchọpụta ihe anyị na omenala na eke ụwa. Anyị na-akwadebe anyị na ụmụ akwụkwọ na-ndú na-esiwanye iche iche otu.
College of Wuru Environments
Mgbe College of Wuru Environments, anyị na-elekwasị anya na atụmatụ, design, ewu na management anyị wuru gburugburu. Anyị na-akwadebe na-agụsị akwụkwọ ike otutu obodo mepere emepe akụrụngwa maka n'ọdịnihu.
Ezi School of Business
The Michael G. Ezi School of Business bụ a collaborative mmụta obodo nke ngalaba, mkpara, ụmụ akwụkwọ, Alumni na azụmahịa ndú raara nye ihe e kere eke, ngwa na ịdị management ihe ọmụma.
A zuru ụwa ọnụ ndú na onu ike research, na School of Dentistry akwadebe ụmụ akwụkwọ na-ezi 21 na narị afọ ụlọ na-egosi dabeere na ọzụzụ ebe ke ọhụrụ ọganihu nke ndu na ihe ndị ọkà mmụta sayensị.
Irè mmụta ọha na eze na usoro maka a iche iche na ụmụ amaala bụ nkume isi nkuku nke ochichi onye kwuo uche. Mgbe College of Education, anyị na raara nye-eme ihe ndị magburu onwe agụmakwụkwọ a kwa eziokwu ọ bụla na-amụrụ na bụla obodo.
Anyị bụ ndị a iche iche na obodo nke ihe ọhụrụ na-arụ ọrụ ka ukwuu mma ndụ anyị na ala, mba anyị na ụwa. Anyị na-eme ya site na-eduga na engineering chọpụtara, ọhụrụ, agụmakwụkwọ na njikọ aka.
Imeri ọhịa na n'oké osimiri nile, si ogbu nke ụwa ka n'ọnụ usoro mbara igwe, na College nke Environment bụ unrivaled ìgwè kpakpando nke gburugburu ebe obibi research, mmụta na ngwa.
The Ukpep School
The UW enye ihe karịrị 370 gụsịrị akwụkwọ na mmemme gafee niile atọ campuses na online, si-nwe ka doctoral omume maka ndị na-launching ma ọ bụ na aka iso agụmakwụkwọ, research ma ọ bụ ọkachamara ọrụ.
The Ozi School
The Ozi School explores na mmekọrịta dị n'etiti ọmụma, technology na ndị mmadụ. Ndị Gụsịrị Akwụkwọ na ichoputa na ojiji na-ọrụ nke ozi, nakwa dị ka ozi teknụzụ, ma na-eme ha nka maka ọganihu nke sayensị, azụmahịa, agụmakwụkwọ na omenala.
The School of Law bụ otu n'ime mba si n'elu ọha iwu n'ụlọ akwụkwọ na otu nke ụwa kasị na-akwanyere ùgwù maka interdisciplinary iwu mfọn na ọmụmụ. Anyị na-akwadebe anyị na ụmụ akwụkwọ ịga nke ọma na evolving iwu ọrụ na-aga na na-ndú na zuru ụwa ọnụ nkịtị ọma.
The UW School of Medicine na-ghọtara dị ka otu n'ime obodo si n'elu na enye nke ọgwụ na ahụ ike mmuta. The akwụkwọ bụ onye ndú na ọzụzụ nke isi na-elekọta ndị dọkịta na-aga n'ihu ike na ihe ọmụma site ná nnyocha sayensị.
N'ihi na ihe karịrị 27 afọ, na UW School of Nursing kemgbe a top-gosiri nọọsụ akwụkwọ. Anyị ozi bụ na-enwe ọganihu nwa ara na sayensị na-eme site na-amụba ihe ọmụma na-akwadebe n'ọdịnihu ndú ahụ ike na ubi.
Mba na ụwa họọrọ, na School of Pharmacy akụziri ndị na-ere ọgwụ na nnyocha isi na-azụ ụmụ akwụkwọ maka a ọrụ na-agwakọta a ịhụnanya nke sayensị na-enwe ndidi na-eche nanị ike na-elekọta.
Kemgbe 50 afọ, na Daniel J. Evans School of Public Policy & Governance emeela a aha dị ka onye nke kasị mma ọha iwu ụlọ akwụkwọ mba. Ọ na-akọwa site na a ọdịnala rigorous ọmụmụ, otutu nnyocha na a nkwa na-ọha ọrụ.
The School of Public Health a raara nye nwee ike ndị mmadụ na-adigide obodo -
mpaghara, mba na ụwa. Anyị karịa 10,000 agụsị akwụkwọ na-arahụ na ike transformative mgbanwe agbanwe ndụ ndị mmadụ.
The School of Social Ọrụ a mba ghọtara ndú n'idozi kasị achọ elekọta mmadụ nsogbu nke ụbọchị anyị site rigorous research, agụmakwụkwọ ọhụrụ na ọha ọrụ.
The obodo nke Seattle bụ otu n'ime ọtụtụ ógbè ke ufọt ufọt mbubreyo narị afọ nke 19 vying maka n'ọkwá na e guzobere ọhụrụ Washington Territory. na 1854, territorial gọvanọ Isaac Stevens na-atụ aro na nguzobe nke a mahadum Washington. Ọtụtụ ndị a ma ama Seattle-ebe bi, isi n'etiti ha Methodist ekwusa Daniel Bagley, hụrụ siting nke a University dị ka a ohere tinye na obodo ahụ dị ugwu. Ha na-enwe ike kwenye n'oge nchoputa nke Seattle na so na territorial ome iwu Arthur A. Denny nke dị mkpa Seattle emeri ụlọ akwụkwọ. The ome iwu ibido kwụrụ ụgwọ abụọ mahadum, otu na Seattle na otu na Lewis County, ma mgbe e mesịrị agabiga ya kpelaara a otu mahadum dị na Lewis County, nyere na mpaghara nyere ala pụrụ ịchọta. Mgbe dịghị saịtị pụta, ome iwu, ume Denny, kpọgara mahadum na Seattle na 1858.
na 1861, scouting malitere maka kwesịrị ekwesị 10 acres (4 o nwere) saịtị na Seattle ije ozi dị ka ndị campus maka a ọhụrụ mahadum. Arthur na Mary Denny nyere asatọ acres, na ibe ọsụ ụzọ Edward Lander na Charlie na Mary Terry nyere abụọ acres na mahadum na a na saịtị ahụ na Denny si Knoll na ogbe ndịda Seattle. Nke a tract e bounded site 4th na 6 emeghe ụzọ na n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ọwụwa anyanwụ na Union na Seneca Okporo ámá n'ebe ugwu na n'ebe ndịda.
UW meghere eze na November 4, 1861, dị ka Territorial University of Washington. N'afọ na-esonụ, ome iwu gafere isiokwu chie incorporating ndị University na guzosie ike a Board of Regents. The akwụkwọ otụhọde ibido, emechi ugboro atọ: na 1863 n'ihi enweghị akwụkwọ, na ọzọ 1867 na 1876 n'ihi ụkọ ego. Otú ọ dị, Clara Antoinette McCarty nāchọ ghọrọ ndị mbụ gụsịrị akwụkwọ UW na 1876 mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na UW na a nzere bachelọ na sayensị. Site na oge Washington banyere Union na 1889, ma Seattle na University toro n'ụzọ. Aha mụbara site mbụ 30 ụmụ akwụkwọ na-fọrọ nke nta 300, na ikwu iche nke campus nyere ụzọ na-etinye aka na mmepe. A pụrụ iche omebe iwu kọmitii gawa site UW gụsịrị akwụkwọ Edmond Meany e kere maka nzube nke na-achọta a ọhụrụ campus mma na-eje ozi na-eto eto na-amụrụ bi. The otu họrọ a na saịtị ahụ na Union Bay n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke ogbe ndịda, na ome iwu ekwesịghị ego maka ya zuo na ụdi ewu.
The mahadum kpọgara si ogbe ndịda na ọhụrụ campus na 1895, akpụ akpụ n'ime ahụ e wuru ọhụrụ Denny Hall. The regents gbalịrị na-emezughị na-ere ochie campus, na-emecha biri na leasing n'ógbè. The University ka nwere ihe a na-akpọ Metropolitan Tract. Na obi nke obodo, ọ bụ n'etiti ndị kasị baa uru iberibe n'ezie ala na Seattle na site ọtụtụ nde US $ na revenue kwa afọ.
The mbụ territorial University ụlọ ahụ adọwa ala 1908 na mbụ ya ugbu a, ebe ụlọ ndị Fairmont Olympic Hotel. The naanị ndụ remnants nke UW mbụ ụlọ na-anọ 24-ụkwụ (7.3 m), ọcha, aka-fluted cedar, Ionic ogidi. Ha na-na-atụtụkọrọ site Edmond S. Meany-otu nke University mbụ na-agụsị akwụkwọ na bụbu isi nke akụkọ ihe mere eme ngalaba. Meany na ya otu, Dean Herbert T. Condon, kpọrọ onye ọ bụla nke na ogidi “Iguzosi Ike n'Ihe,” “ụlọ ọrụ,” “Faith” na “arụmọrụ,” ma ọ bụ “NDỤ.” The ogidi ugbu a na-eguzo Sylvan Grove Ụlọ ihe nkiri.
Nhazi nke 1909 Alaska-Yukon-Pacific ịkọwa lee anya ka n'ụzọ dị ukwuu undeveloped campus ka a praịm ọnọdụ maka ha ụwa ngosi. Ha bịara nkwekọrịta na Board of Regents na kwere ka ha na-eji campus mgbakwasị maka ịkọwa. n'ọnọdụ, na University ga-enwe ike iri uru nke mmepe nke campus maka ngosi mgbe ngwụsị ya. Nke a gụnyere a zuru ezu saịtị atụmatụ na ọtụtụ ụlọ. The atụmatụ maka A-Y-P ịkọwa kwadebere site John Charles Olmsted e mesịrị webata n'ozuzu campus-nwe-atụmatụ na-adịgide adịgide na-emetụta ndị layout nke campus.
Agha ụwa abụọ wetara ndị agha na campus, na ụfọdụ ụlọ ọrụ nwa oge gbazinyere ka gọọmenti etiti. Ụdi post-agha oge ụfọdụ nke dị ịrịba ama ibu maka University. The oge n'etiti agha hụrụ ịrịba mgbasa na elu campus. Construction nke na-emesapụ aka nkà quadrangle, mara ụmụ akwụkwọ dị ka “The Quad,” malitere na 1916 wee na-na nkebi ruo mgbe 1939. The mbụ nku abụọ nke Suzzallo Library, atụle ụkpụrụ ụlọ centerpiece nke University, e wuru na 1926 na 1935, karị. Ọzọkwa ibu bịara na njedebe nke World War II na Itie nke G.I. Bill. Otu n'ime ihe ndị kasị mkpa nmepe nke oge a bụ nke mbụ nke akwụkwọ ahụ na 1946. Ọ ga-emecha na-eto eto n'ime University of Washington Medical Center, ugbu a họọrọ site U.S. News na World Report otu n'elu iri n'ụlọ ọgwụ na United States. Ọ bụ n'oge a na oge na University of Washington akụkọ ihe mere eme nke ọtụtụ Japanese America ha lawa si mahadum omumu oru n'ogige tinyere n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri United States dị ka akụkụ nke Executive Order 9066 eso ọgụ na Pearl Harbor. N'ihi ya, ọtụtụ Japanese American “anya na-abụ” agụsị akwụkwọ na-enweghị ike na-enweta ha diplọma na-ghọtara maka ha arụzu na mahadum ruo University of Washington si ncheta ememe maka Japanese Americans isiokwu The Ogologo Njem Home ẹkenịmde ke May 18, 2008 na isi campus.
Ke mbubreyo 1960, na University of Washington Police Department ghọrọ usoro si University Safety na Nche Division omume mgbochi Vietnam War ngagharị iwe. Ọ ugbu a nwere ikike n'elu University of Washington campus na University-ekesịpde ụlọ, ma e wezụga n'ihi na Radford Court n'ụlọ Aja Point. The 1960 na 1970 na-mara dị ka “ọlaedo afọ” nke mahadum ruru ka ezigbo uto na ụmụ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, na-arụ ọrụ ego na ùgwù n'okpuru idu ndú nke Charles Odegaard si 1958 ka 1973. Aha na UW karịa okpukpu abụọ-gburugburu 16,000 ka 34,000-dị ka nwa ọhụrụ ọganihu ọgbọ bịara nke afọ. Dị ka ọ na ọtụtụ American mahadum, a oge ya akara elu-etoju nke na-amụrụ activism, na ukwuu nke aghara lekwasịrị anya gburugburu obodo rightsand emegide Vietnam War. Odegaard guzobere a ọhụụ nke ewu a “obodo nke ndị ọkà mmụta” na kwenyere na steeti Washington legislatures ntọt ha investments kwupụta mahadum. Ọzọkwa, Washington kwụsị, Henry M. Jackson andWarren G. Magnuson-eji ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha clout na itinyekwu gọọmenti etiti research ewepụ na University of Washington na a ụbọchị, UW bụ otu n'elu nnata nke gọọmenti etiti research ego na United States. The results gụnyere ihe na-arụ ọrụ ego na-abawanye nke $37 nde ke 1958, karịrị $400 nde ke 1973, na 35 ụlọ ọhụrụ na okpukpu abụọ n'ala ohere nke mahadum.
The University meghere campuses na Bothell na Tacoma na 1990. Ná mmalite, ndị a campuses nyere curricula maka ụmụ akwụkwọ na-achọ Bachelor si degrees na-ama okụre afọ abụọ nke elu-akụziri, ma ma ụlọ akwụkwọ transitioned ka afọ anọ na mahadum, ịnakwere mbụ Freshman klas na ọdịda nke 2006. Ma campuses enye eteufọk ogo omume dị ka nke ọma. na 2009 na University meghere otu ụlọ ọrụ na Spanish obodo nke León na mmekota na mahadum n'obodo.
Ị chọrọ atụle University of Washington ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Washington na Map
photos: University of Washington ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Washington.
Eteta Forest University Winston-Salem